DAAWO Qurbajoog Gobolka Doolo & Qoraxey Kormeer Ku Soo Maray Mashaaricyo DDSI Ka Hirgalisay |
DAAWO Qurbajoog Gobolka Doolo & Qoraxey Kormeer Ku Soo Maray Mashaaricyo DDSI Ka Hirgalisay
Lahel-Yucub (estvlive) 19/08/2017
Waxaa dawlad deegaanka Somalida Itoobiya ku soo qulqulaya Qurbajoog u dhalatay Deegaanka islamarkaana ay ka Qeybqadanayaan hormarka iyo nabadgalyada iyo maamulka suban.
Qurbajoog u dhalatay gobolka Doolo iyo Qoraxey ayaa kormeer ku gaadhay degmada shilaabo ee Gobolka Qoraxey sifa ay u soo arkaan mashaaricyada xukumada DDSI ay ka hirgalisay goboladaasi.
waxaana siweyn loogu soo dhaweeyay Tuulada Qarsooni oo ka tirsan degmada shilaabo ee gobolka Qoraxey ayagoo qurbajoogta halkaasi kala kulmeen soo dhaweyn aad u diiran.
Hadaba qurbajoogta ayaa ku dheelmaday degmada shilaabo islamarkaana waxaa soo dhaweyn diiran kala hor yimid bulshada qeybaheeda kala duwan waxeyna subaxnimadii dambe qurbajoogta kulan la yeesheen bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada shilaabo.
Waxeyna kawada tashadeen sida shacabka iyo qurbajoogta oo isku wada duuban dhankooda ya uga qeybqaadan lahaayeen hormarka dhankasta kaalitooda kaga aadan.
Inta kadib qurbajoogta ayaa u ambabaxay degmada lahel-yucub oo ka tirsan Gobolka Doolo Islamarkey gaadheen ayaa waxey soo booqdeen mashaariicyada hormarineed ay xukuumadda Dawlad deegaanka Somalida itoobiy ay ka hirgalisay degmadaasi sida ceelka-riiga iyo biyo xidheenka weyn ee laga hirgaliyay degmada.
Qurbajooga ayaa aad u soo dhaweeyay Mashaaricyada hormarineed ee laga hirgaliyay degmada waxeyna sheegeen in degmadan ay aheyd degmo oomana ah maantana waxey marqaati ka yihiin in ay indhahooda ku soo arkeen biyaha iyo hormarka laga hirgaliyay.
Ugu dambeyntii Qurbajoogta Gobolka doolo iyo qoraxey ayaa booqan doona mashaaricyada xukumaddda ka hirgalisay goboladaasi qurbajoogtan ayaa ku yimaadeen xukumada oo sameysay dhanka xidhiidhka taasina ay sababtay in qurbajoogta si isdaba joog ah ay u yimaadaan deegaanka si ay indhahooda ay ku arkaan xaqiiqada dhabta ah ee deegaanka ka jirta.